बच्चा जन्माउनु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु - ज्ञानविज्ञान
बच्चा जन्माउनु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
पूर्वगर्भावस्थाको समयमा नै आमाको शरीरमा सम्पूर्ण पोषण तत्वको मात्रा पुगेको हुनुपर्दछ ।
शिशुको वृद्धि विकास आमाले सेवन गर्ने पौष्टिक आहारबाट नै हुने भएकाले पूर्वगर्भावस्थादेखि नै आमाले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ । र, आफ्नो आहारमा पनि उत्तिकौ ध्यान दिनुपर्छ ।
२. धूम्रपान तथा मद्यपानः
आमा–बुबा दुवैले पूर्वगर्भावस्थाको समयबाट नै धूम्रपान तथा मद्यापान त्याग्नु पर्छ । पुरुषले पूर्वगर्भावस्थामा धूम्रपान तथा मद्यपान गरे भने निम्न असर पर्न सक्छः
– अनावश्यक गर्भधारण
– असामान्य वीर्य उत्पादन
– नवजात शिशुमा शारीरिक र मानसिक असामान्यता
३. अनुवंशिक स्क्रिनिङ र आमाबाबु परामर्शः
आमाबाबु दुवैले वंशाणुगत कुनै रोग छन् कि भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । ताकि नवजात शिशुमा त्यसको असर कम परोस् । साथै, पूर्वगर्भावस्थामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण हेरबिचारबारे स्वास्यकर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
पूर्वगर्भावस्थाको समयमा राम्रो हेरविचार तथा परामर्श पाएको खण्डमा गर्भावस्थाको समयमा आइपर्ने विभिन्न जटिलताबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । आमा र शिशुको स्वास्थ्य राम्रो हुने भएकाले यसबारे सबैले चासो राख्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्यमा जटिलता ल्याउने समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । जस्तैः आमाको स्वास्थ्य स्थिति, मधुमेह, रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप, आमाको मानसिक अवस्था आदि बारे ध्यान दिन सकिन्छ ।
आमाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु पहिले नै न्यूनीकरण गरेर गर्भावस्थालाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
रुबेला, हेपाटाइटिस, टिटी विरुद्धको खोप पनि पूर्व गर्भावस्थामा आमाले लगाउन सक्छिन् ।
यसले गर्भावस्थामा हेपाटाइटिस, टिटनास, रुबेला भाइरसले गर्दा हुने जटिलता (गर्भपात वा भूण्र विकासमा आउने समस्या आदि) न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
पूर्वगर्भावस्थामा महिलाले कम्तिमा पनि तीन महिनाअघिबाट फोलिक एसिड खानुपर्छ । यसले गर्दा आमा र बच्चालाई निम्न फाइदा पुग्छः
– बच्चाको वजनमा बृद्धि
– आमाको शरीरमा आइरनको कमी हुनबाट रोक
– रक्तअल्पत्तामा सुधार
– तन्त्रिका ट्युबको दोष (न्युरल ट्युब डिफेक्ट) घटाउँछ ।
Topics #बच्चा जन्माउनु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा
Don't Miss it केहि यस्ता विधीहरु, जसले घाँटीको दुखाईमा प्रभावकारी उपचारको काम गर्छ
Up Next यस्ता छन्, नेल पोलिसलसका बेफाइदा
यी खाद्यपदार्थ रातमा सुत्नुअघि खानाले निरोगी बन्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ
मह महका अनेक फाइदा छन् । तर, सुत्नुअघि दैनिक महको प्रयोगले मानिसलाई निरोगी रहन सहयोग पुर्‍याउँछ । बेलुकी प्रयोग…
अचार सेवन गर्नाले यस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन्
१. अचारमा नुनको मात्रा अत्याधिक धेरै मात्रामा हुन्छ, जसले सोडियम बढाउनको साथै हाई ब्लडप्रेसर र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु पनि पैदा…